မွေးနေ့ပါရှင်…( 28 ပြည့်တာ … 28 ) | Layma's World
« သင်ယူဆဲပါ ပန်းချီကား »
winkabar, on January 14, 2008 at 7:44 pm said:
jerry, on January 14, 2008 at 8:52 pm said:
လက်ဆောင်က ကြိုမသိလို့ ပါမလာဘူး ။ ကြိုမပြောတော့ သိဘူးလေ နော့။ နောက်နှစ်မှဗျို့ ။ 🙂
မောင်မျိုး, on January 14, 2008 at 8:57 pm said:
မျှားပြာ, on January 15, 2008 at 1:57 am said:
ကိုအတာ, on January 15, 2008 at 5:23 am said:
Happy Birthday ပါခင်ဗျား။ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ညွန်ပြထားသော နေရာများတွင် အ၀စားပြီး လက်ဆောင်အတွက် ဒီရာမှ နှစ်သက်ရာ ၀က်ဝံရုပ်လေးများကို ယူနိုင်ရန် ပေးခဲ့တယ်။ http://emotionalcorner.blogspot.com/2007/01/blog-post_07.html 😀
tzm, on January 15, 2008 at 9:13 am said:
ဘယ်နေ့က မွေးနေ့လဲ… မပြောသွားဘူး…။
nu-san, on January 15, 2008 at 9:25 am said:
လေးမရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ.. ကောင်းကင်ကြီးဆီက ပူစာထားတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေလည်း အမြန်ရပါစေ..
မုန့်အရင်သွားစားလိုက် အုံးမယ်နော်.. နောက်မှ လက်ဆောင်ယူသိလား.. 😛
nyeinnyo, on January 15, 2008 at 12:33 pm said:
လောလောဆယ် ကိုကောင်းကင်ကြီးကို ပူဆာထားတဲ့ အလှပြင်ပစ္စည်းလေးတွေလည်း အမြန်ဆုံးရပါစေဗျာ 😛
nyo, on January 15, 2008 at 1:36 pm said:
ဆုမွန်, on January 15, 2008 at 2:25 pm said:
အကိုကောင်းကင်ကြီးနဲ့လည်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မိသားစုလေးမှာ သားသား မီးမီးလေးတွေနဲ့ ဘ၀ထက်ဆုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်
Dear sis……..pls forgive me for my belatedbday wish!!!!
မောင်နိုင်, on January 15, 2008 at 2:49 pm said:
သဇင်ဏီ, on January 15, 2008 at 3:10 pm said:
kthuyien, on January 15, 2008 at 8:58 pm said:
Tay Zar, on January 16, 2008 at 9:58 am said:
ချစ်လေပြေ, on January 16, 2008 at 7:22 pm said:
ဂျေ, on January 17, 2008 at 2:37 am said:
MyaYwetWai, on January 17, 2008 at 10:27 am said:
မလေးမရဲ့ ကောင်းကင်ကြီးနဲ့အတူ အဆုံးအစမဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ အမြဲရရှိပါစေ။ 🙂
မွန်, on January 17, 2008 at 2:46 pm said:
layma, on January 17, 2008 at 7:19 pm said:
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ ဘော်ဘော်တွေ ..လက်ဆောင်ပေးတဲ့ သယ်ရင်းတွေ… လက်ဆောင်မပေးဘဲ အာလူးဖုတ်သွားတဲ့ ဘော်ဒါတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်…။
စိုးထက် - Soe Htet !, on January 18, 2008 at 8:33 am said:
ံHappiest Birthday !!! နောက်ကျ သွားပါတယ် … ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု အကြီးကြီး ရပါစေ 😛
ဇီးကွက်, on January 18, 2008 at 9:19 am said:
sparrow, on January 19, 2008 at 2:53 pm said:
Shwun Mi, on January 19, 2008 at 8:53 pm said:
အိုး.. နောက်တောင်ကျနေပါလား.. ဟဲဟဲ .. မကုန်နိုင်တဲ့ အရာတွေမို့ မျက်လုံးနဲ့ လိုက်စားသွားပါတယ်.. 🙂
မလေးမလဲ လှလှပပ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဦးကောင်းကင် ကြီးနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် အသက်ထက်ဆုံး ရှိပါစေ လို့ ..
layma, on January 20, 2008 at 6:35 pm said:
နောက်ကျပေမယ့် အပေါက်ဝက မပြန်သွားပဲ…ဆုတောင်းပေးသွားကြတာကျေးဇူးပါရှင်..။
မင်းကျန်စစ်, on January 21, 2008 at 7:02 am said:
အရမ်း နောက်ကျနေပြီဆိုတာ သိပေမယ့် ဆုတောင်းပေးချင်လို့ဗျို့။ စာမေးပွဲကြောင်း တကယ်ကို မအားမနေ ရှုပ်နေမိတယ်။ အသစ် မရေးမိသလို လိုက်လဲ မလည်ဖြစ်ဘူးဗျာ။ လက်ဆောင်ကိုတော့ software တွေ ပေးလိုက်မယ်။ လာယူပြီးသားရော မယူရသေးတဲ့ အသစ်တွေရောကို လက်ဆောင်မှတ်နော် 😛 နောင် မွေးနေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်ပါစေ အမရေ။
tu tu, on January 24, 2008 at 12:42 am said: